VAPET 6000 အျောတိုဘူးလမှေုတျစကျက တဈနာရီတှငျ ဘူးပေါငျး ၆၀၀၀ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။
လုပျဆောငျနိုငျစှမျး- တဈနာရီလြှငျ ဘူးပေါငျး ၆၀၀၀
အာမခံချက်- ၁ နှစ်
နိုင်ငံအနှံ့ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည်
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: လမှေုတျစကျ ,	Bottle (under 2-Liter)
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAPET6000
VAPET6000 bottle blowing machine withacapacity of 6000 bottles/h is being provided by Viet An with the cheapest price in the market.
VAPET 6000 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်ကို Viet An မှ ဈေးကွက်တွင် အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချနေပါသည်။
Video of bottle blowing machine
Collective image of Viet An company
Viet An ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့လိုက်ပုံ
Your business is looking foraproduct with high quality and productivity, come to Viet An, we will fully meet the most stringent requirements of customers with VAPET6000 bottle blowing machine customers have Can be completely assured and trusted by VAPET6000 is an industrial machine used to produce plastic bottles, pet bottles to meet the business of bottled water, cosmetics, pharmaceuticals, food. …. Ensuring safe, automated process quality to help maximize productivity and save labor costs for businesses.
သင်က သင့်ရဲ့စီးပွါးရေးအတွက် ကွာလတီမြင့်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်သော ပစ္စည်းကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် Viet An ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင့်အတွက် စည်းကမ်းများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပေးနေပါတယ်။ VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်က ရေဘူးလုပ်ငန်း၊ အလှကုန်၊ ဆေးဝါး၊ အစားအသောက် လုပ်ငန်းများအတွက် ပလပ်စတစ်ဘူးများ၊ pet ဘူးများထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို အာမခံပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို အချိန်လျှော့ချပေးခြင်း၊ အလုပ်သမား ကုန်ကျိစရိတ် လျှော့ချခြင်းအတွက် ကူညီပေးပါတယ်။
VAPET6000 isapet bottle blowing machine withacapacity of 6000 bottles/h with the latest Italian technology in 2021 - energy saving, fully assembled at Viet An factory in Vietnam meeting ISO 9001:2015 standard. most slots available today. Applying the continuous feeding technology, the preform is fed from the bottom up continuously without interrupting the production cycle of the enterprise. There is no need for workers to be on duty to put the preform into the heater and then transfer the preform from the heater to the blower, when the pet bottle is formed, you do not have to remove the bottle. Automatic is completely different from semi-automatic, right?
VAPET6000 က တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော pet ဘူးလေမှုတ်စက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အင်နာဂျီချွေတာပေးပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ Viet An ကုမ္ပဏီမှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ISO 9001:2015 စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အောက်ခြေအထိ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ခြင်း၊ ထိုမှတဆင့် လေမှုတ်စက်ထဲသို့ ပြောင်းပေးခြင်းတို့အတွက် အလုပ်သမား မလိုအပ်ပါဘူး။ pet ဘူး ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း သင်က ဘူးကို ဖယ်ရှားစရာ မလိုပါဘူး။ အော်တိုက တဝက်အော်တိုနဲ့ အရမ်းခြားနားတယ်မလား။
When you have researched and learned about an automatic pet bottle blowing machine, you certainly know. The shell, cap and label ofafinished water bottle account for 70% - 80% of the value of that water bottle. So to be able to increase profits further, you must reduce the bottle cost ofafinished water bottle. To reduce the cost of bottles, the only way is that you have to invest in producing water bottles by yourself. Then you go to find out, buy pet bottle blowing machine, right?
အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်အကြောင်း သင်က သုတေသနပြုလုပ်ပြီး သင်ယူပြီးတဲ့အခါ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ဘူးရဲ့ အခွံ၊ အဖုံး၊ လေဘယ်များက ရေဘူးတန်ဖို့ရဲ့ ၇၀-၈၀% ရှိတယ်ဆိုတာ သင်သေချာပေါက် သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ်အကျိုးအမြတ်များ တိုးပွါးလာရန် ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ရေဘူးရဲ့ အကုန်အကျကို လျှော့ချရပါမယ်။ ဘူးရဲ့ ကုန်ကျငွေကို လျှော့ချရန် သင်လုပ်ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောအရာက ရေဘူးထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ ကိုယ်တိုင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ဝယ်ယူရမယ်။
Please think carefully, which company should choose to buyafully automatic 6000 bottle/h bottle blowing machine! Viet An encounteredacase whereaViet An guest boughtabottle blowing machine fromatrading company and failed and had to discard it. Therefore, Viet An wants customers to buy bottle blowing machine will not encounter suchacase again. The company is like the above case has accepted to spend nearly 1.5 billion that you guys! Buyingalittle cheaper is not safe at all guys! That company went to Viet An and boughtabottle blowing machine atamore expensive price. And still very satisfied with Viet An.
တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ဝယ်ယူဖို့ ဘယ်ကုမ္ပဏီက ဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပါ။ Viet An ၏ ဧည့်သည်တစ်ယောက်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဝယ်ယူပြီး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An မှ ဝယ်ယူသူများကို ဒီလိုကိစ္စမျိုး ထပ်ပြီး မကြုံတွေ့စေခြင်ပါဘူး။ အပေါ်ကလို ကိစ္စရပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ၁.၅ ဘီလီယမ်နီးပါး သုံးရပါတယ်။ ပိုပြီး ဈေးပေါတဲ့ ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်းက လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ ထိုကုမ္ပဏီက Viet An ကို လာရောက်ခဲ့ပြီး ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပိုဈေးကြီးစွာ ဝယ်ယူခဲ့တယ်။ သို့ပေမယ့် သူစိတ်ကျေနပ်မှု ရခဲ့တယ်။
Why should you buy bottle blowing machine VAPET6000 capacity 6000 bottles/h of Viet An. This article Viet An will introduce to you the automatic bottle blowing machine VAPET6000 with many advantages and useful for businesses to grasp the opportunities of bottling business or bottled water business, .. provided by Viet An company.
တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Viet An မှ VAPET6000 လေမှုတ်စက်ကို ဘာကြောင့် ဝယ်ယူသင့်တာလဲ။ ဒီဆောင်းပါးတွင် Viet An သည် တဝက်အော်တို VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Viet An မှ ပေးပို့သော ဘူးခွံ၊ ရေ၊ ရေဘူး များအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
VAPET6000 bottle blowing machine with capacity of 6000 bottles/h
VAPET6000 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်
Viet An Joint Stock Company - Customer confidence affirms our brand
Viet An Joint Stock Company-ဝယ်ယူသူများရဲ့ ယုံကြည်ချက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
Viet An General Trading Joint Stock Company, formerly known as Viet An general and commercial limited liability company, was equitized since August 2009. Viet An isacompany, enterprise specializing in manufacturing, importing, exporting, distributing bottle blowing machine, bottle blowing machine, washing machine, filling machine, ice making machine, water filtration line and many other products. brand VA, USApec, Vinaro number 1 in Vietnam.
Viet An General Trading Limited Company လို့ လူသိများခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Stock Company လို့ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ရေခဲထုတ်စက်များ၊ RO ရေစစ်များ၊ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးမှုတ်စက်များ၊ ရေစစ်လိုင်းများ၊ ဗီယက်နမ်တွင် နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ UA, USApec, Vinaro ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်အောက်မှာ ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An isacompany, enterprise specializing in manufacturing, importing, exporting, distributing bottle blowing machine, bottle blowing machine, washing machine, filling machine, ice making machine, water filtration line and many other products. brand VA, USApec, Vinaro number 1 in Vietnam.
Viet An သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ ဘူးလေမှုတ်စက်၊ ဆေးကြောစက်၊ လောင်းဖြည့်စက်၊ ရေခဲထုတ်စက်၊ ရေစစ်ထုတ်လိုင်းနဲ့ အခြား ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် UA, USApec, Vinaro တံဆိပ်များကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို အဓိကထားတဲ့ ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Quality – Meet high quality standards during manufacturing and distribution activities,
ကွာလတီ- ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ကွာလတီ အဆင့်အတန်း မီပါတယ်။
Accessible - Professional and friendly
နားလည်မှု- နီးနီးကပ်ကပ်ရှိပြီး ရင်းနှီးကာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ပါတယ်။
Collaboration – Buildasolid and strong team with the cooperation of all colleagues in the corporation; Develop solid relationships with the customers and partners in the spirit of understanding.
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း- လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ ခိုင်မာသော အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ထားပါတယ်။ ဝယ်ယူသူများနဲ့ ပါတနာများကို နားလည်ခြင်းမှာ ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Dynamic – Always move forward, develop continuously; seize opportunities and create new standards; ready to receive new ideas and innovation.
တက်ကြွခြင်း- အမြဲ ရှေ့သို့ဆက်သွားကာ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးတွေ ရှာဖွေပြီး စံနှုန်းအသစ်တွေ ဖန်တီးပါတယ်။ အကြံဥာဏ်အသစ်တွေကို လက်ခံဖို့ အဆင့်သင့်ပါပဲ။
Advanced technology and reasonable price – Apply the most advanced technology in the water processing industry to bring the customers the most practical benefits.
ခေတ်ရှေ့ပြေးသော နည်းပညာနဲ့ သင့်တော်သော ဈေးနှုန်း- ဝယ်ယူသူတွေဆီကို လက်တွေ့ဆန်သော ကောင်းကျိုးတွေ ယူဆောင်လာဖို့ ရေထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံတွေမှာ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Responsibility - Be transparent and honest; demonstrateasense of responsibility to the community; set specific standards in corporate governance.
တာဝန်ယူမှု- ရိုးရှင်းပြီး ရိုးသားပါ။ လူထုကို တာဝန်ယူမှုတွေ ပြသပါတယ်။ ပူးပေါင်းမှုမှာ တိကျသော စံနှုန်းတွေကို ချမှတ်ပါတယ်။
Since its establishment up to now, Viet An has continuously grown and continuously developed not only in production scale, but also in sales. Currently, Viet An always holds the leading position in the market of pet bottle blowing machines, plastic bottles in Vietnam with high annual supply to the market. From the first day of establishment, up to now, the number of employees of the company has been replicated throughout the country with four branches to ensure the delivery of goods on schedule.
ယခုအချိန်ထိ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းအရ Viet An သည် ထုတ်လုပ်မှုစကေးနဲ့ ရောင်းချခြင်းမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးထွားတိုးတက်နေပါတယ်။ ယခုအခါ Viet An သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဘူးလေမှုတ်စက်များ၊ ပလပ်စတစ်ဘူးလေမှုတ်စက်များကို ဈေးကွက်သို့ နှစ်စဉ် ပေးပို့တဲ့ ဦးဆောင်နေရာမှာ နေရာယူနေပါတယ်။ ပထမဆုံး စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ နေ့ကတည်းက ယခုအချိန်ထိ ကုမ္ပဏီရဲ့ အလုပ်သမား အရေအတွက်က တိုးပွါးလာပြီး နိုင်ငံအနှံ့ ရုံးခွဲ ၄ ခုတည်ထောင်ခဲ့ကာ ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်မှု အချိန်ဇယားကို သေချာစေပါတယ်။
During the history of establishment and development, with the continuous efforts of all Viet An employees, there have been many great achievements and continuously grown strongly, completing the mission to customers, making contributions. significant for the industrial machinery industry in Vietnam and ASEAN countries. With these achievements, Viet An was honored to receive many worthy awards such as:
တည်ထောင်မှုနဲ့ တိုးတက်မှု သမိုင်းကြောင်းအတွင်း Viet An ရဲ့ အလုပ်သမားများအားလုံး၏ မလျှော့သော ဇွဲများကြောင့် ကြီးမြတ်သော အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ပြီး ဝယ်ယူသူများရဲ့ မစ်ရှင်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ စက်ရုံသုံး ပစ္စည်းများလည်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An မှ ဆုများစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Gold medal for high quality Vietnamese goods in 2009.Gold medal for high quality Vietnamese goods in 2009.
ရွှေတံဆိပ်ဆု- ဗီယက်နမ် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်စည်များ ဆု(၂၀၀၉)
Gold medal of leading brand in Vietnam in 2015.
ရွှေတံဆိပ်ဆု- ဗီယက်နမ် ဦးဆောင် ကုန်တံဆိပ်များ ဆု(၂၀၁၅)
Certificate of Viet An brand achieved ISO 9001:2015 certification.
Viet An ၏ ကုန်တံဆိပ် တရားဝင် လက်မှတ် ရရှိခြင်း-ISO 9001:2015 လက်မှတ်
Representatives of the Vietnam Small and Medium Enterprises Association attended, announced the Tet congratulatory message and received the certificate of merit from President Truong Tan Sang on January 12, 2016.
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ လုပ်ငန်း အလယ်အလတ်နှင့် အသေးစား အဖွဲ့အစည်းသို့ တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရပြီး Tet ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာ ဖတ်ကြားပေးခဲ့ရကာ သမ္မတ Truong Tan Sang ထံမှ အကျိုးဆောင်လက်မှတ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Receivedacertificate of merit for businesses with good achievements in the fight against counterfeit, fake and poor quality goods on November 29, 2016
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အရည်အသွေးနိမ့် ပစ္စည်းအတုများကို တိုက်ထုတ်ကာ ကောင်းသော ရလဒ်အတွက် ကောင်းကျိုးဆောင် လက်မှတ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
As one of the 100 leading companies in Vietnam receivedacertificate of merit from the country's owner Tran Dai Quang on January 7, 2017.
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ Tran Dai Quang ထံမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်အဖြစ် လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Received the gold cup in honor of "Enterprise integration and development" on January 8, 2017.
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် လုပင်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ရွှေဖလား ရရှိခဲ့ပါတယ်။
On October 2, 2018, Viet An was officially recognized asamember of the Hanoi City Association of supporting industry businesses.
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တည်းက ဟနွိုင်း စက်ရုံစီးပွါးရေး ထောက်ပံ့ပေးသော အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားဝင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
On November 18, 2018, Viet An was honored to receive the gold cup and the certificate of merit for the Thang Long gold brand - Outstanding Entrepreneur 2018.
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသော ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် Thang Long ရွှေတံဆိပ်-ထူးချွန်သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် အခမ်းအနားမှာ ရွှေဖလား ရရှိခဲ့သည်။
On November 26, 2018, Viet An Joint Stock Company was honored to receive the Certificate of Merit from Prime Minister Nguyen Xuan Phuc for individual collectives with outstanding achievements in the implementation of the central resolution of7session X.
ခုနှစ်ခုမြောက် ဗီယက်နမ် ဗဟိုကွန်မြူးနစ် ကော်မတီရဲ့ ဒဿမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးမှာ တစ်ဦးချင်း ထူးချွန်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ဝန်ကြီးချုပ် Nguyen Xuan Phuc ဆီမှ အကျိုးဆောင် လက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Automatic bottle blowing machine with capacity of 6000 bottles/h
တစ်နာရာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်
The VAPET6000 pet bottle blowing machine is applied Italy's No.1 advanced bottle blowing technology, completed at Viet An factory according to ISO 9001:2015 standards. With this pet bottle blowing machine, blowing plastic bottles, agencies will have the best quality products for their production as well as supply bottles, pet bottles, plastic bottles for the market. with reasonable price and guaranteed quality. Due to beingafully automatic blowing machine line, the VAPET6000 bottle blowing machine is fully automatic feeding, the bottle preform will be automatically arranged in the correct head by the bottle preform loading machine (not reversed) in the order of entering the heater. After being heated in the heater, you will seeablowing machine to blow. The number 6000 corresponds to the capacity of 6000 bottles/hour that the machine can blow.
VAPET 6000 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင် US နံပါတ် ၁ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး Viet An စက်ရုံတွင် ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီ လေမှုတ်စက်နဲ့ဆိုရင် အေဂျင်စီများက ၄င်းတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး ကွာလတီပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပြီး ဈေးကွက်မှာ ဘူးများ၊ pet ဘူးများ၊ ပလပ်စတစ်ဘူးများကို သင့်တော်သော ဈေးနှုန်း၊ အာမခံချက်ရှိသော ကွာလတီဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် VAPET6000 အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်က အော်တိုလုပ်ဆောင်နို်င်အောင် တပ်ဆင်ထားပြီး ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ရန် အော်တိုဘူးများကို သယ်ပေးသောစက် (ပြောင်းပြန်မဟုတ်ပါ) ဖြင့် မှန်ကန်သော ခေါင်းနေရာတွင် စီပါတယ်။ နံပါတ် ၆၀၀၀ က စက်ဖြင့် လေမှုတ်နိုင်သော တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
The blowing machine is compact and lightweight, doesn't take up too much area. This product is suitable for business units of pure drinking water, bottled carbonated water nationwide.
လေမှုတ်စက်က သိပ်သည်းပြီး အလေးချိန်ပေါ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရာအရမ်းမယူပါဘူး။ ဒီပစ္စည်းက နိုင်ငံအနှံ့ ရေသန့်များ၊ အချိုရည်ဘူးများ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Photo of automatic bottle blowing machine VAPET6000
The bottle blowing machine system (Must buy) VAPET6000 from Viet An includes:
Viet An မှ VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင်……
A. Main machine system
လေမှုတ်စက်နှင့် အပူပေးစက်၏ ပုံ
Main machine system
အဓိကစက်စနစ် Capacity for 350ml bottle (pcs/h)
၃၅၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4500-6000
Capacity for 500ml bottle (pcs/h)
၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4300-6000
Capacity for 1500ml bottle (pcs/h)
၁၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 3000-4000
The maximum capacity of one blow head (pcs)
လေမှုတ်ခေါင်းတစ်ခု၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2500
Largest bottle capacity (L)
အကြီးမားဆုံးသော ဘူးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2
အပူပေးခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 30
Force of closing mould (Kn)
ပုံစံခွက် ပိတ်ပေးသော အား 650
Size of the blower (L*W*H mm)
လေမှုတ်စက် အရွယ်အစား 2780*1995*2030
Size of the heater (L*W*H mm)
အပူပေးစက် အရွယ်အစား 1950*1350*2650
The VAPET6000 fully automatic bottle blowing machine has an automatic bottle feeding unit. You just need to pour the bottle preform into the barrel. The preform loader automatically loads the bottle preform and arranges it and puts it in the heater.
VAPET6000 အပြည့် အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်မှာ အော်တို လုပ်ဆောင်သော ယူနစ် ပါရှိပါတယ်။ သင်က ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းကို စည်းပိုင်းထဲသို့ ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို သယ်ပေးသော စက်က အော်တိုသယ်ဆောင်သွားပြီး ၄င်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Heating machine in the VAPET6000 bottle blowing machine system: has the effect of heating the Preform and distributing heat evenly on the surface of the Preform. This heater heats 2000-2000 preform of 350ml and 500ml sizes. As for the 1500ml bottle preform, the heater can heat 1500-1800 preform. Then the surface of the bottle is expanded evenly so that it can be transferred to the server department to blow out the standard bottles. Minimize the error of the finished product.
ဘူးလေမှုတ်စက်တွင် ပါဝင်သော အပူပေးစက်- အကြိုပုံသွင်းခြင်းများကို အပူပေးခြင်း၊ ထိုအပေါ်သို့ အပူကို ဖြန့်ပေးခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဒီအပူပေးစက်က ၃၀၀ မီလီမိတာ နဲ့ ၅၀၀ မီလီမီတာ အရွယ်အစားများရဲ့ ၂၀၀၀-၂၀၀၀ အကြိုပုံသွင်းစနစ်ကို အပူပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ ဘူးအကြိုပုံသွင်းအတွက်ဆိုလျှင် အပူစက်က ၁၅၀၀-၁၈၀၀ အကြိုပုံသွင်းကို အပူပေးရပါမယ်။ ထို့နောက် ၄င်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ချဲ့ပေးပါတယ်။ သို့မှသာ ၄င်းကို လေမှုတ်ရန် ဆာဗာယူနစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်း နည်းစေပါတယ်။
Bottle blowing machine: Including blowing part and bottle mold part. Thanks to the compressed air of the air compressor, the preform, which is evenly expanded from the heater, is fed into the mold unit of the blower. Then the lungs will blow air from the high-pressure air compressor after it has been filtered and dried in, causing the preform to deform intoa350 ml bottle in accordance with the shape of the mold. This VAPET6000 blower blows 2000-2000 bottles of 350ml and 500ml sizes within 1 hour. As for 1500ml bottles, this machine can blow 1500-1800 bottles within 1 hour. If you want to still use this 350 ml bottle blowing machine to blow 500ml bottles, for bottles smaller than 1500 ml, you must use other blowers and molds. And you can contact Viet An for private reservation.
ဘူးလေမှုတ်စက်- လေမှုတ်ကိရိယာနဲ့ ပုံစံခွက် ပါရှိပါတယ်။ လေဖိသ်ိစက်ရဲ့ ဖိသိပ်ထားသော လေကြောင့် စက်မှ အပူသို့ တိုးချဲ့ထားသော အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို လေမှုတ်ပေးသော ပုံစံခွက် ယူနစ်တွင် ထားပါမယ်။ လေမှုတ်ပေးသော ကိရိယာက လေကို ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်မှ မှုတ်လိုက်ပြီး အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို ပုံစံခွက်အတိုင်း ၃၅၀ မီလီမီတာ ဆလင်ဒါ အခွံအဖြစ် ပုံစံပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒီလေမှုတ်စက်က ၃၅၀ မီလီမိတာ နဲ့ ၅၀၀ မီလီမီတာ အရွယ်အစားများရဲ့ ၂၀၀၀-၂၀၀၀ အကြိုပုံသွင်းစနစ်ကို လေမှုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ ဘူးအကြိုပုံသွင်းအတွက်ဆိုလျှင် လေမှုတ်စက်က ၁၅၀၀-၁၈၀၀ အကြိုပုံသွင်းကို လေမှုတ်ပေးရပါမယ်။ ဒီဘူးလေမှုတ်စက်ကို ၁၅၀၀ မီလီလီတာအောက် ဘူးများအတွက် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ကွဲပြားတဲ့ လေမှုတ်ကိရိယာနဲ့ တံဆိပ် လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သီးသန့်ဆွေးနွေးရန် Viet An ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
B. The auxiliary equipment of the bottle blowing machine hasacapacity of 6000 bottles/h
တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၆၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘူးလေမှုတ်စက်၏ အကူ ပစ္စည်းများ
High – Pressure Air Compessor
Photo of high-pressure air compressor
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက် Unit Number
အလုပ်လုပ်သော ဖိအား Bar 30
လျှပ်စစ်ပါဝါ Kw 18.5*2
Air compression capacity
လေဖိသိပ်စက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း M3/min 3.2
စက်၏ အတိုင်းအတာ D*R*C mm 2800*1200*2000
အလေးချိန် KG 1500
The high pressure compressor of the VAPET6000 bottle blowing system is responsible for creating high pressure air flow, providing high pressure air to blow out the right bottles of the right size, extremely beautiful design.
VAPET6000 ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်က ဖိအားမြင့် လေစီးကြောင်း ဖန်တီးပေးတယ်။ လေမှုတ်ရန် ဖိအားမြင့်သော လေ ပေးတယ်။
Air tank for high pressure air compressor
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်များအတွက် လေတိုင်ကီ
Photo of Air tank photo
လေတိုင်ကီ Unit Number
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း Lít 1100
ဖိအား Bar 30
ဘူးအရွယ်အစား D*H mm dày 10mm 800*2000
အလေးချိန် KG 400
Air tank: The air tank acts to balance the air, helping the air blowing from the high-pressure compressor to the blower evenly. This will prevent the finished product from being defective.
လေတိုင်ကီ- ဂက်စ်တိုင်ကီက ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်မှ လေမှုတ်ကိရိယာသို့ လေမှုတ်ခြင်းကို ကူညီပေးပြီး လေကို ညှိပေးရန် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်ကီက မပျက်စီးပါဘူး။
Air cooling filter
Photo of Air cooling filter
Air Cooling Filters
လေအေးစစ်ထုတ်ကိရိယာများ Unit Number
အထွေထွေ ဖော်ပြချက်များ m3/Mpa 3.0/3.0
Air filter: The air filter of the VAPET6000 bottle blower is mounted behind the air tank (also known as the air tank). The air filter works to filter the air and clean the air before it is fed into the air dryer. It is very important that the air is cleaned when the bottle finish is defective.
လေစစ်ထုတ်ကိရိယာ- လေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို လေတိုင်ကီ(ဂက်စ်တိုင်ကီ)နောက်တွင် တပ်ဆင်ပါတယ်။ လေစစ်ထုတ်ကိရိယာက လေကို စစ်ထုတ်ပေးပြီး ခြောက်သွေ့စေသောစက်သို့ မထည့်ခင် လေကို သန့်ရှင်းရန် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Air Cooling drier
Photo of Air Cooling Dryer
Air dryer : In the bottle shell blower system, the air dryer works to dry the air before blowing the bottle. This will limit the failure of the bottle to be blown out.
လေအခြောက်ခံစက်- ဘူးကို လေမမှုတ်ခင် လေကို အခြောက်ခံပေးပါတယ်။ ဒါကဘူးကို လေမှုတ်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်းကို ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။
Water cooled machine
Photo of Water cooled machine
Water cooled machine : In the system of bottle blowing machine, the cooling tower works to cool the molds and finished products after blowing. Because if there is no cooling tower, it will get hot after blowing it and stick to the mold. Makes it difficult for you to separate the bottle. The capacity of the bottle blower will be reduced.
Above is the system of blowing machine VAPET6000 of Viet An.
ရေအေးစက်- လေမှုတ်ပြီးနောက် ပုလင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပြီးသော ပစ္စည်းကို အေးပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အေးစေသောစက်သာ မရှိခဲ့လျှင် လေမှုတ်ပြီးတဲ့အခါ ဘူးက ပူနေပြီး ပုံစံခွက်တွင် ကပ်နေမှာ ဖြစ်တယ်။ ပုလင်းကို ခွဲထုတ်ရန် သင့်အတွက် ခက်ခဲစေမှာ ဖြစ်တယ်။
အပေါ်က ဖော်ပြထားခဲ့တာက Viet An မှ VAPET6000 လေမှုတ်စက်၏ စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Low pressure air compressor and air tank
Photo of low pressure air compressor and air tank
ဖိအားနည်းသော လေဖိသိပ်စက်နှင့်လေတိုင်ကီ Unit Number
လျှပ်စစ်ပါဝါ Kw 18.5
လေဖိသိပ်နိုင်စွမ်း M3/min 1.6
စက်၏အတိုင်းအတာ D*R*C mm 1140*735*1260
အလေးချိန် KG 520
The low-pressure compressor of the VAPET6000 bottle blowing system is responsible for creating high-pressure air flow, providing high pressure to blow out the right bottles of the right size, extremely beautiful design.
VAPET6000 လေမှုတ်စက်ရဲ့ ဖိအားနည်းသော ဖိသိပ်စက်က ဖိအားများသော လေစီးကြောင်းကို ဖန်တီးခြင်း၊ မှန်ကန်သော အရွယ်အစား၊ အလွန်လှပသော ဒီဇိုင်းဘူးများအတွက် လေမှုတ်ရန် အားပြင်းသော ဖိအား ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း Lít 600
ဖိအား Bar 10
ဘူးအရွယ်အစား D*H mm dày 10mm 600*2000
အလေးချိန် KG 300
လေတိုင်ကီ- လေတိုင်ကီက လေကို ညှိပေးခြင်း၊ ဖိအားမြင့် ဖိသိပ်စက်မှ လေမှုတ်စက်သို့ လေမှုတ်ပေးခြင်းကို ကူညီပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါက ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
MOLD (PRIVATE BUY) of bottle blowing machine
ဘူးလေမှုတ်စက်၏ ပုံစံခွက် (သပ်သပ်ဝယ်ရသော)
Photo of bottle blowing machine
In addition, you must purchaseaseparate mold to match the bottles you want to create. You can order in outside for providing. Not necessarily buying from Viet An.
ထို့အပြင် သင်ဖန်တီးချင်တဲ့ ပုလင်းပုံစံအတိုင်း သီးခြား ပုံစံခွက်ကို ဝယ်ယူရပါမယ်။
အပြင်ကနေလည်း ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်။ Viet An မှ မဝယ်မနေရ ဝယ်ယူရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
Imported Steel Mold 350 ml
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၃၅၀ မီလီလီတာ
Imported Steel Mold 500 ml
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၅၀၀ မီလီလီတာ
Imported Steel Mold 1000 ml
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၁၀၀၀ မီလီလီတာ
Imported Steel Mold 1500 ml
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၁၅၀၀ မီလီလီတာ
Imported Aluminum Mold 350 ml
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၃၅၀ မီလီလီတာ
Imported Aluminum Mold 500 ml
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၅၀၀ မီလီလီတာ
Imported Aluminum Mold 1000 ml
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၁၀၀၀ မီလီလီတာ
Imported Aluminum Mold 1500 ml
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၁၅၀၀ မီလီလီတာ
Viet An Steel Mold produces 350 ml
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၃၅၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Steel Mold produces 500 ml
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Steel Mold produces 1000 ml
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၁၀၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Steel Mold produces 1500 ml
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၁၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Aluminum Mold produces 350 ml
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၃၅၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Aluminum Mold produces 500 ml
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Aluminum Mold produces 1000 ml
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၁၀၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Viet An Aluminum Mold produces 1500 ml
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၁၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
What will you receive when buying VAPET6000 bottle blowing machine from Viet An?
Viet An မှ ယူဆောင်လာသော VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ ကောင်းကျိုးများ
The price of 350ml, 500ml, and 1500ml bottle blowing machine is always the cheapest in the market.
The VAPET6000 bottle blowing machine has the lowest error rate! There is no machine on the Vietnamese market today that can guarantee suchalow rate of finished bottle errors. It helps to reduce the cost of your finished product significantly.
၃၅၀ မိလီမီတာ၊ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်များရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက ဈေးကွက်မှာ ဈေးအပေါဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်က အပျက်အစီး အရှိန်နှုန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်မှာ အခုလိုမျိုး ပျက်စီးမှု အရှိန်နှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်သော ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ဘူးများကို အာမခံတဲ့ စက် မရှိပါဘူး။ ၄င်းက ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းရဲက ကုန်ကျငွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
The VAPET6000 bottle blowing machine uses the latest Italian technology, so it is extremely energy-efficient. Reducing the cost of the bottle, helping you to compete very well with the market, without having to worry about price competition.
The bottle blowing machine is operated withacomputer controlled system, which is extremely stable. Designed withasafety lock, automatically disconnects when an incident occurs.
VAPET 6000 ဘူးလေမှုတ်စက်က နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အင်နာဂျီအတွက် အလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဘူး၏ ကုန်ကျငွေကို လျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို ဈေးနှုန်းပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ဈေးကွက်မှာ နေရာရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အလွန် တည်ငြိမ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လုံခြုံသော လော့နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ပြသနာ တစုံတရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် အော်တို မတပ်ဆင်ဘဲ နေပါတယ်။
The bottle blowing machine provided by Viet An is the only machine on the market that can change the mechanism from bottle blowing to bottle blowing. This mechanism is tailored by Viet An according to the needs of each customer. Viet An will respond well. During operation the machine works very smoothly. Less noise, does not affect people around.
Viet An မှ ပေးပို့သော ဘူးလေမှုတ်စက်ကသာလျှင် ဘူးလေမှုတ်စက် တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဈေးကွက်ရှိ တစ်ခုတည်းသော စက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူများရဲ့ မှာယူတဲ့ပုံစံအတိုင်း သီးခြားတပ်ဆင်ပေးပါတယ်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ စက်က ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဆူညံမှုနည်းပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူများကို မထိခိုက်စေပါဘူး။
The VAPET6000 bottle blowing machine is also compact and does not take up space. Make your workshop space clean and eye-catching.
Designed withasafety lock, automatically disconnects when an incident occurs.
The bottle blowing machine hasalong-term warranty of up to 12 months.
After-sales service is extremely good. Only available in Viet An general trade joint stock company.
VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို နေရာမပြုန်းတီးစေရန် သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ရုံနေရာကို သန့်ရှင်းစေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။ ၂၀ လီတာ ဘူးမှုတ်ကိရိယာက ၁၂ လ အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ရောင်းချပြီးနောက် ဆားဗစ်ကလည်း အလွန် ကောင်းပါတယ်။
The bottle blowing machine of Viet An meets ISO 9001:2015 quality standards
Viet An ၏ ဘူးလေမှုတ်စက်က ISO 9001:2015 ကွာလတီ စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Process of VAPET6000 bottle blowing machine supplied by Viet An
Viet An မှ ပေးပို့သော VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ
Step 1: Check that the preform is present in the preform container. If you do not have or haveafew, please fill it up! Fill the preform into the blank container of the VAPET6000 automatic bottle preformer.
အဆင့်၁- အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို ပုံးထဲတွင် ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ တကယ်လို့သင့်မှာ အနည်းငယ်တောင် မရှိဘူးဆိုလျှင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြည့်ပေးပါ။ အကြိုပုံသွင်း VAPET6000 အော်တိုဘူး အကြိုပုံသွင်းခြင်း ပုံးထဲသို့ ထည့်ပါ။
Step 2: Start VAPET6000 bottle blowing machine, time programming technician and bottle blowing mode available on the computer control panel automatically runs. Bottle preforms will be automatically loaded and loaded by the preform loader and put into the heater to heat the preform, making the bottle preform surface expand evenly.
အဆင့်၂- VAPET6000 လေမှုတ်စက်ကို စတင်ပါ။ ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာ ရှိတဲ့ အချိန် ပရိုဂရမ် ပြုလုပ်ခြင်းနည်းပညာနဲ့ ဘူးလေမှုတ်ခြင်းက အော်တို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းများကို သယ်ယူကိရိယာမှ အော်တို သယ်ဆောင်ပေးပြီး အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ပေးပါတယ်။ ထို့နောက် ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်း မျက်နှာပြင်ကို ဖြန့်ပေးပါတယ်။
Step 3: After the preform surface is evenly expanded, the preform will be automatically picked up by the grabbing heads to the blowing machineunit.
အဆင့်၃- အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို ဖြန့်ပြီးတဲ့အခါ ဆွဲယူပေးသော ခေါင်းများမှ မှုတ်ပေးသောစက် ယူနစ်ဆီသို့ အော်တို ကောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Step 4: The machine will automatically blow the bottle with high pressure air pressure. After blowing the finished bottle, the bottle will be cooled and pushed out. Then the preform will be transferred to the filling unit for water filling or will be transferred to the gathering place for transfer to the consumer.
အဆင့်၎- စက်က ဘူးကို မြင့်သော ဖိအားဖြင့် မှုတ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ဘူးတွေကို မှုတ်ပြီးတဲ့အခါ ဘူးတွေကို အအေးခံပြီး ပို့ပေးပါမယ်။ ထို့နောက် အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို ဖြည့်ပေးသော ယူနစ်ဆီသို့ ရေဖြည့်ရန် ရွှေ့ပေးပြီး ဝယ်ယူသူများဆီသို့ ပို့ဆောင်ရန် ထားသောနေရာဆီသို့ ရွှေ့ပေးပါတယ်။
Note when usingaVAPET6000 bottle blowing machine from Viet An
Viet An ၏ VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အသုံးပြုသောအခါ မှတ်သားထားရမည်များ
Regularly clean the VAPET2200 bottle blowing machine. To help the bottle blowing machine not to rust, as well as ensure the safety of the finished bottle.
VAPET 2200 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးပါ။ စက်ကို သံချေးမတက်စေရန်၊ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ရေဘူးအခွံများရဲ့ ကျန်းမာရေး လုံခြုံမှုအတွက်ရယ် ဖြစ်ပါတယ်။
With the bottle blowing machine VAPET2200 you should maintain the bottle blowing machine periodically weekly or monthly. The process of machine maintenance and maintenance also depends on the needs of the business.
စက်၏ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်လတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ။ စက်၏ ထိန်းသိမ်းမှုက စီးပွါးရေး လိုအပ်ချက်များအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
Regularly check the specifications of machines, fans and equipment parts of blower systems, heaters, and accessories. See the parameters and compare with the results to see if they are correct? If wrong you should check. If you cannot self-test, please contact Viet An for advice and testing support!
စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ၊ ပန်ကာများ၊ လေမှုတ်စက်ရဲ့ စက်ကိရိယာများ၊ အပူပေးစက်များ၊ အဆင်တဆာများကို ပုံမှန် စစ်ဆေးပေးပါ။ ပါရာမီတာများကို ကြည့်ပြီး ၄င်းတို့က မှန်ကန်ရဲ့လား နှိုင်းယှဉ်ပါ။ တကယ်လို့ မှားနေမယ်ဆိုရင် သင် ပြန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကိုယ်တိုင် မစမ်းသပ်တတ်ဘူးဆိုရင် Viet An ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
It is recommended to install the machine inadry and airy place, and it is spacious and convenient for the operator and maintenance of the machine.
စက်ကို ခြောက်သွေ့ပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရှိသော နေရာတွင် တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုပါတယ်။ ၄င်းက နေရာကျယ်ဝန်းပြီး အော်ပရေတာနဲ့ စက်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးမှုအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
Should periodic machine cleaning, periodic machine maintenance to improve machine durability, should combine other equipment to createaclosed and most economical production system.
စက်၏ ကြာရှည်ခံမှု မြင့်မားအောင် စက်ကို အချိန်မှန် သန့်ရှင်းပြီး ထိန်းသိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ အခြားကိရိယာနဲ့ ပေါင်းစပ်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် အကုန်အကျလည်း နည်းနိုင်ပါတယ်။.
Make sure the power supply is required by the manufacturer. Do not use the machine when the power is too low. If you press the machine to run when the voltage is insufficient, it will cause unnecessary damage to the bottle blower. Lightly reduces the service life, the energy causes fire and explosion of bottle blowing equipment.
ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ ပါဝါပေးပို့မှု လိုအပ်တာ သေချာပါစေ။ ပါဝါက အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ စက်ကို အသုံးမပြုပါနဲ့။ ဗို့အားနည်းတဲ့အချိန်မှာ စက်ကို လည်ပတ်မယ်ဆိုရင် ဘူးလေမှုတ်စက်အတွက် မလိုအပ်တဲ့ ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆားဗစ်သက်တမ်းကို လျော့စေပါတယ်။ အင်နာဂျီက ဘူးလေမှုတ်စက်ရဲ့ ကိရိယာကို မီးလောင်ခြင်း ပေါက်ကွဲခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Customers who buy the bottle blowing machine VAPET6000 from Viet An will be transported and installed free of charge with 1 year machine warranty and long-term maintenance. Withateam of professional technicians with high experience in the profession, we will give customers the best conditions for mutual benefits.
If you haveademand for bottle blowing machine VAPET6000 please contact: 0949.41.41.41 for the best advice! Wishing you good health.
Viet An ရဲ့ VAPET 6000 ကို ဝယ်ယူသူများသည် အခမဲ့ပို့ဆောင် တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ တစ်နှစ် အာမခံချက်၊ ကာလကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး အတွေ့အကြုံများသော နည်းပညာအသင်းမှ ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို လမ်းညွှန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က ဘူးလေမှုတ်စက် VAPET6000 ကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ် ရယူလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
VAPET6000 Bottle Blowing System Specifications (Must-Buy)
VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက် ဖော်ပြချက်များ (မဝယ်မနေရ)
Latest Italian technology in 2021 - energy saving, Complete assembly at Viet An's factory in Vietnam meeting Iso 9001:2015 standard
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာ- အင်နာဂျီချွေတာပေးခြင်း။ ဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့ Viet An စက်ရုံမှာ အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားပြီး ISO 9001:2015 စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ Fully automatic feeding, the workpiece is fed from the top down with an automatic transition picker
အပြည့်အော်တိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အထက်မှ အောက်သို့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အော်တို ပြောင်းရွှေ့ခြင်း သယ်ယူစက်နဲ့ ပြုလုပ်ခြင်း
Capacity for 500ml bottle (pcs)
Capacity for 1500ml bottle (pcs)
ဖိအားမြင့်လေဖိသိပ်စက် Compressive pressure (Bar)
Compressive capacity (M3/min)
Dimensions of the machine (D * R * C mm)
စက်၏ အတိုင်းအတာ 2800*1200*2000
Air tank for high pressure air compressors
ဖိအားမြင့်လေဖိသိပ်စက်များအတွက် တိုင်ကီ Capacity (Liter)
Compressive pressure (Bar)
Dimensions of the machine (D * H mm) 10mm thick
စက်၏ အတိုင်းအတာ 800*2000
လေစစ်ထုတ်ကိရိယာ General specifications
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 3.0m³/3.0Mpa
လေအေးအခြောက်ခံစက် General specifications
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 3.8m³/3.0Mpa
ရေအေးစက် General specifications
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 5HP
ဖိအားနည်းသော လေဖိသိပ်စက် Compressive pressure (Bar)
ဖိသိပ်နိုင်သော ဖိအား 30
Air Tanks for Low Pressure Air Compressors
ဖိအားနည်းသော လေဖိသိပ်စက်များအတွက် လေတိုင်ကီများ Capacity (Liter)
ဖိသိပ်နိုင်သော ဖိအား 10
Unmolding Selling Price (USD)
ပုံစံခွက်မပါဘဲ ရောင်းချသော ဈေးနှုန်း
Private Purchase Mold (Not necessarily purchased from Viet An)
သီးသန့် ပေးချေရသော ပုံစံခွက် (Viet An မှသာ ဝယ်ယူရမည်ဟု မဆိုလိုပါ)
Hỏi đáp & đánh giá VAPET6000 ဘူးလေမှုတ်စက်
5L VAPET400 - 5L ဘူးလေမှုတ်စက်
20L VAPET120 20L ဘူးလေမှုတ်စက်